Nekuti Google Yakati Saka | Martech Zone
Nekuti Google Yakadaro
Chitatu, Kukadzi 27, 2013 Chitatu, Kukadzi 27, 2013 Douglas Karr
Google ndiyo tenzi. Nguva. Hatigone kuzvidzivirira. Kana iwe uchida kubatsirwa nekutsvaga kwekutsvaga, iyo SEO fomula iri nyore - ingo teerera kune izvo Google zvaunoda kuti uite uye uzviite! (Uye usaite sezvavanoita)
Zvakaitika zvakare svondo rino. Mumiriri kubva kudhipatimendi rewebhu akabvisa yambiro muWebmasters uye nekuwedzera kwekukanganisa se zvisingakoshi. Saye chipangamazano wavo, ini ndinokumbirwa kudzivirira, nhamba, nei vachifanira kugadzirisa iwo matambudziko. Kunzwisisa kuti kukura kwakabatanidzwa kwakanyanya uye kune mutengo wakakwira kugadzirisa nyaya, heino mhinduro yangu:
Nekuti Google yakataura kudaro.
Nei hurukuro ichifanira kuenda kumberi kweiyo? Ini ndinoshuva dai ndaiziva yazvino algorithm uye ndaigona kuita zvemashiripiti kuverenga shanduko pane ino saiti, makwikwi, kufarirwa kwezviri mukati uye nekuuya nemagumo ekuverenga kuti upe iyo yemubhadharo ongororo. Ini handizive algorithm. Ini handikwanise kupa humbowo. Zvese zvandingakuudze ndezvekuti:
Zvinodanwa optimization. Optimization inzira inoenderera mberi yandinofanira kuongorora ruzivo rwese rwunopihwa neGoogle, kuongorora saiti yako kune zviyero zvavo, uye nekukupa iwe kuongorora uye pekutanga runyorwa kuti ugadzirise. Mazuva ese, Google inopa huwandu hwenzwisiso pamusoro pekuti ivo vanoda kuti iwe uratidze sei zvemukati kukwezva yekutsvaga chinzvimbo.
Tinogona kukoshesa zvichitarisa pane zvimwe zvakawanikwa nevamwe vatungamiriri veSEO pawebhu uye kuburikidza neruzivo nevatengi vedu. Asi mukati meiyo runyorwa, ini handikwanise kukuudza izvo yakazvimirira mhedzisiro yeimwe neshanduko ichaita zvizere kune ako masosi. Kana iwe uine mumwe munhu anokuudza kuti ivo vanoziva… ivo vari kunyepa.
Muenzaniso uchangobva kuitika ndewe kushambadzira zvemukati. Vhiki rino, Google yakayeuchidza munhu wese kuti kana iwe uchiripa mumwe munhu wekushambadzira zvemukati - neakateedzera chinongedzo - iko kutyora kwavo mazwi ebasa.
Ini handisi kuzoita nharo nemutengi pane maitiro avakatora ekuwana izvo zvemukati ... kana nuance yekuti yaive blogger inosvika izvo zvakaitika kuva nehungano mariri… asi hazvina kunyatso kubhadhariswa chinongedzo, zvirimo chete. Ndinoziva kuti ivo vari pachinzvimbo zvakanaka uye chinzvimbo ichocho chiri kutyaira mijenya yebhizinesi. Asi ndichiri kuvayambira kuti varege.
Kana iwe usinga regedzi mushe, uye usiri kupindura meseji kubva kuGoogle nezvesaiti yako, zvikanganiso zvakanyorwa muWebmasters, kana kuti urikubhadharira zvemukati zvekushambadzira… zvimise.
Tags: zvekushambadzira zvemukatigoogle webmastersGoogle +optimizationorganic searchkutsvaga injiniseo
Yakanaka blog chinyorwa Doug! Kinda akandiyeuchidza nezvehukama hweMubereki / Mwana. "Enda unochenesa imba yako junior!" "Sei?" Nokuti ndakuudza kudaro! Parizvino ndiri muhurukuro nemutengi anofunga kuti vanofanirwa kukwanisa kuvhura webhusaiti yavo itsva neMuvhuro mangwanani uyezve neMuvhuro masikati ezuva rimwe chetero vanotarisira kuti Google itore zvishuwo zvavo. Ndakavatsanangurira kuti mushure mekubatanidza maitiro akanakisa eSEO muwebhusaiti yavo zvichiri kune wemasimbaose Google kuti apindure. Google haina kumirira isu, isu tinomirira paGoogle. Mutengi wangu haana uye haazviwani. Vanoda zvese zvinopihwa neGoogle mukutsvaga kwemuno ZVINO! Maonero ekuti, "Zvinhu zvakanaka zvinouya kune avo vanomirira" akange asina basa kune bhizinesi diki muridzi anoda iyo inoshuvira Peji Yekutanga yeGoogle.
Mar 15, 2013 pa 1: 05 AM
Zvino izvo zvimwe zvinhu zvakanaka ipapo! Iyo inenge ichida zvayo domain ine izvo zvirimo pazviri. Iwe unoziva senge "rega ndiku Google iwe". Brilliant!